स्वास्थ्यशैली – Recent Nepal News
स्वास्थ्यशैली	अपनाउनुहोस् यी १० सजिला उपाय तपाईंलाई कहिल्यै पत्थरी हुने छैन	आजभोलि दिन प्रतिदिन पत्थरी रोगको समस्या बढदै गइरहेको छ । विशेस गरी खानपाननै पत्थरिको प्रमुख कारक तत्व हो ।यहाँ पत्थरीबाट […]
Share this:Tweet	तपाईं तनावपूर्ण जीवनवाट मुक्त हुन चाहानुहुन्छ ? दुई मिनेटको नियमले जीवन परिवर्तन गरिदिनेछ !	काठमाडौं -जीवनमा केही कुरा गर्नैपर्ने हुन्छन् । यस्ता कुरा गर्न धेरै बेर लाग्दैन तर तपाईंलाई दिनदिनै गर्नुपर्दा झ्याउ चाहिँ लाग्न […]
Share this:Tweet	राम्रो निद्रा लाग्दैन ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग थिच्नुस् !	काठमाडौं – अनिद्राका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र यसले मानिसलाई अनेकौं प्रकारले असर पार्छ । निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म […]
Share this:Tweet	कब्जियत हुन्छ भने भुलेर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुराहरु	दूध दूधमा फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले कब्जियत भएको मानिसले बढी मात्रामा दूध पिउने गरेमा पाचन प्रक्रिया कमजोर बन्न […]
Share this:Tweet	थाहाँपाईराख्नुहोस् ,के हो इन्डोस्कोपिक सर्जरी ?	प्रा.डा पदमरान पन्त, शल्यचिकित्सा क्षेत्रको प्रगति दु्रत गतिमा भइरहेको छ । टाउकोमा हिर्काएर बेहोस गराई अप्रेसन गर्ने अवस्थाबाट सुरु भएको […]
Share this:Tweet	हरियो खुर्सानी खानुको फाईदै-फाईदा, तपाईलाई थाहा छ ? यी सात रोगबाट बचाउँछ !	काठमाडौं – खुसार्नी एक पीरो पदार्थ हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको अध्ययनले खुसार्नी स्वास्थ्यका एकदमै उपयोगी रहेको देखाएको छ । […]
Share this:Tweet	यी हुन क्यान्सरका लक्षण – पढ्नुहोस, जान्नुहोस र अमुल्य जीवन बचाऊनुहोस	एजेन्सी – शरीरमा कैयौ यस्ता दुखाई हुन्छ; जस्तै, थकान लाग्नु, लामो समयसम्म ज्वरो आइरहनु आदिलाई सामान्य सम्झेर हामीले त्यसमा ध्यान […]
Share this:Tweet	ख्याल गर्नुहोस्,यी लक्षण देखिएमा तपाइलाई मस्तिष्क घात हुन सक्छ !	काठमाडौं – मस्तिष्कसम्म रगत सञ्चार हुन नसकेमा ‘ब्रेन स्ट्रोक’ अर्थात् मस्तिष्क घातको खतरा बढ्छ । यस्तो घात जो कोहीलाई जुनसुकै […]
Share this:Tweet	किन लाग्छ खोकी ? थाहा पाउनुहोस् खोकी लाग्नुको कारण	काठमाडौं –खोकी लाग्नु हामी धेरैमा प्राय देखिरहने स्वास्थ्य समस्या हो । खोकी आफैमा रोग नभएर विभिन्न रोगहरुको सुरुवाती लक्षण हो […]
Share this:Tweet	दिमाग तेजिलो बनाउने सजिलो उपाय	काठमाडौं – शारीरिक र मानसिक रुपमा फूर्तिलो हुनु आवश्यक पर्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्ने केही उपाय अपनाउ सकिन्छ । हिडडुल […]